एटिएम मेसिनमा नेपाली भाषा अनिवार्य राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन « Dainiki
६ जेठ, काठमाडाैँ । तपाईंलाई आवश्यकपर्ने पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कसरी निकाल्नुहुन्छ ? एटिएम मेसिनको प्रयोग गर्नुहुन्छ वा चेकमार्फत गर्ने गर्नुभएको छ ?
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:२८
१७ असार, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशतले बढेपछि नेपाल
एशियाली विकास बैंकद्धारा काेराेना महामारीविरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई ३६ करोड अनुदान
१७ असार, काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई रु
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बृद्धि
१६ असार, काठमाडाैँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजना गरेको छ । लकडाउनको
कोभिड-१९ मा भएको खर्च, आम्दानी र कारोबारको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले छुट्टै परीक्षण गर्ने
१६ असार, काठमाडाैँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोभिड-१९ मा भएको खर्च, आम्दानी र कारोबारको अलग्गै लेखा